Inona no fomba tsara indrindra ahazoana vola backlinks ho an'ny SEO?
Andao hiatrika izany - fananganana backlinks any ivelany ho an'ny SEO dia iray amin'ireo singa fototra izay afaka mitondra ny tranokalanao na blôginao mba hisarihana tsara kokoa amin'ny fikarohana an-tserasera. Nefa alohan'ny hanombohanao dia eritrereto ity fahamarinana mahatsiravina ity momba ny fananganana azy ireo amin'ny fikarakarana fikarohana. Noho izany, ataovy azo antoka fa efa vonona amin'ny fototra manaraka ianao alohan'ny ahafahanao mandroso ara-drariny amin'ny fividianana backlinks ho an'ny SEO:
Tokony hanana tranokala na bilaogy tsara azo atao amin'ny sehatra teknika.
Tokony hanorina tranokala maromaro ianao.
Tokony hampiasa ny fotoananao sy ny ezaka ianao mba ho votoaty miavaka izay manome lanja - price to stripe parking garages md.
Ireto ny sasany amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahana mampiakatra ny rindran-damba ivelany ho an'ny SEO:
1. Fidio ny fitaovam-pifandraisana ankavanana, toy ny Semalt Analyzer, Miondrika Frog SEO Spider, Moz ao amin'ny Open Site Explorer - Nandinika azy ireo aho tamin'ny fampiharana ho an'ny tranonkala sy bilaogy roa. Tsara ny manamboatra ny fahadisoana ara-teknika rehetra mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny mpampiasa manaraka amin'ny alalan'ireto manaraka ireto:
Ny famoronana tranokala maivana amin'ny Internet ary ny traikefan'ny mpampiasa.
Votoatin'ny tranonkala duplicative, ary koa Metadata duplicate.
302 fanovana ary mamadika ny rojo.
404 diso ary ny fahadisoana diso.
Tsy fampiasana diso momba ny backlinks ivelany sy ny torolàlana SEO (e. h. , noindex, nofollow).
2. Mifantoha amin'ny zavatra ilain'ny mpampiasa, fa tsy manitsy fotsiny amin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny Google. Midika eto aho fa ny votoatinao dia tokony hitondra ny tena lanjany ary azafady ny mpampiasa. Amin'izany fomba izany, mametra ny fotoana sy ezaka ataonao amin'ny fananganana backlinks ivelany ho an'ny SEO - ahazoana azy ireo amin'ny votoatiny - ataovy azo antoka fa tsy manana olana farafaha farafaharatsiny ianao:
Tsy afa-po ny votoatinao mpampiasa marina (asa lava loatra na manambany, izay tsy dia mety velom-panontaniana amin'ny filàn'ny mpikaroka velona).
Votoaty efa ela (tadidio - ny tranonkala na ny bilaogy dia andrasana hilalao tsara sy hanampy ny mpampiasa mihoatra noho ny mpifaninana nicheo).
Tsy ampy ny fikarohana momba ny angon-drakitra (mazava ho azy fa mety hanana fahasalamana be loatra ny mahita ny tenanao eo an-tampon'ny fikarohan'i Google, nefa mbola tsy ampy ny fandresena).
Tsy mahay mamaky teny sy manoratra (mihevitra ny hamolavola ny tranga manokana, ny takelaka manintona, ny infografika, ary ny votoaty hafa manan-danja manintona amin'ny mpihaino anao).
Mahafinaritra ny mijery sary (mora kokoa amin'ny famakiana amin'ny bala, sasin-tsarimihetsika tsara, ary lisitry ny famaritana, tsy ampiasaina afa-tsy horonam-peo misy soratra, sasin-teny, ary sary, ary koa fonosana manintona sy mampiavaka azy).
. Ny fomba tokana ahazoana tombontsoa avy any ivelany ho an'ny SEO dia mamorona fifandraisana. Andeha hojerena izany - ny tranonkalanao na ny bilaogy dia tsy nosy lavitra any an-dranomasina. Ny fifandraisana miorina tsara sy ny fifandraisana ara-pahasalamana ihany no mety hahatonga azy ireo hahazoana lozam-pifamoivoizana mahery vaika kokoa sy hiparitaka be amin'ny Internet. Ho an'ny tombontsoa avy amin'ny fomba fitrandrahana tsy miankina dia diniho ireto manaraka ireto:
Ny fandaniana betsaka amin'ny votoatiny dia afaka mamela anao tsy hahazo rohy kokoa manondro ny tranokalanao na ny blôginao ho avy fa tsy Ampio ny tranonkalanao na ny bilaogy hitondra fitarihana bebe kokoa, mizara, manaraka, sns.
Mametraka fifandraisana matotra amin'ny andaniny sy ankolaka amin'ireo mpandala ny indostria sy bilaogera ambony. Aza mametra-tena amin'ireto fanentanana mampihetsi-po sy tsy misy ilana azy amin'ny alàlan'ny mailaka mangatsiaka.
Manoratra hevitra sasantsasany izay heverinao tsara sy azo ekena eo amin'ny blaogy ambony nalaina na ireo tranonkala malaza indrindra amin'ny indostrian'ny orinasa na orinasa fivarotana.
Mametraka ny tranokalanao na ny blôginao ho mendri-kaja iray, mendrika ny handray ireo valiny azo antoka azo antoka ireo ho azo antoka. Midika izany fa afaka mahazo fankasitrahana amin'ny lahatsoratrao, lahatsoratra ianao na bilaogy vahiny manan-danja amin'ny lohahevitra sasantsasany na lohahevitra tena tadiavina indrindra - mba hampiroboroboana ny votoatinao fotsiny ary ho hitan'ny mpiserasera maro araka izay azo atao amin'ny Internet.
Ho famaranana, tadidio fa ny tanjonao fara-tampony dia ny mankafy fanehoan-kevitra maro sy mizara amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy malaza - ora vitsy monja taorian'ny namoahana ny vaovao farany, fanesorana vaovao, vokatra na fanompoana. Noho izany, manoro hevitra ny hamafisina ny lohahevitra momba ny Content Promotion ho an'ny fanadihadiana amin'ny ho avy ianao. Izany dia handoa hatrany, azo antoka.